Apetraka eo amin’ny handrina ny felan-tanana roa. Toy ny pasohanana amin’ny rantsan-tanana miainga avy eo afovoany mankany amin’ny sisiny ny handrina.
Raha efa izay dia avonkona ny totohondry dia orina amin’ny ankihibe ny volomaso.
Atao manoritra boribory manaraka ny fihodin’ny famataranandro ny eo amin’ny fihirifana roa, amin’ny alalan’ny loha-rantsan-tanana. Somary manindry kely rehefa manao ity otra ity. Atao mifanohitra indray ny fihetsika avy eo.
Orina ny manodidina ny maso, eo amin’ny mifanandrify amin’ny taolana, ka atao manoritra boribory hatrany ny fihetsiky ny rantsan-tanana.
Eto dia ny fanondro roa indray no ampiasaina hipotsipotserana ny taolan’orona. Atao midina ny fihetsika, ka tsindriana amin’ireo fanondro ireo koa ny fototry ny orona roa.
Farany, apetraka eo amin’ny teboka ifanenan’ny valanorano ambany sy ny valanorano ambony ny rantsan-tanana. Eo afovoan’ny takolaka no misy azy io. Orina atao manoritra boribory ireo faritra ireo mba hanatsotra ny hozatra mifanandrify aminy.
Rehefa manotra ireo faritra voalaza ireo dia atao amin’ny lafiny roa foana ny fihetsika, izany hoe : mihodina miankavia dia averina miankavanana indray avy eo. Atao mialohan’ny hatory ity otra ity no tena tsara. Atao isan’andro mba hisy vokany. Ho hitanao fa hitsotra tsara ny hodi-tava, ela vao mipoitra ny kentrona, ho afaka mora foana koa ny havizanana hita soritra eny amin’ny tarehy.